Maninona raha arotsaka?
2011-12-17 @ 10:30 in Andavanandro
Fomba fiteny malagasy hatry ny elaela ihany ny hoe: "manary fako". Zavatra tsy ilaina intsony dia ariana. Fony aho mbola kely, tamin'ny nipetrahako teto Antananarivo, dia saiky isaky 100 metatra raha lavitra dia nisy toerana fanariam-pako hatrany. Niova tsikelikely izy io taty aoriandriana hany ka mila ho isaky ny iray kilometatra, tsia andeha atao hoe 300 metatra, vao ahitana izany fanariam-pako izany. Tsy mahagaga raha lasa fikaramana manokana ho an'ny olona sasany ilay "manary fako".
Indrisy anefa fa niova ilay "manary fako" amin'izao fotona izao. Nisy ny fotoana nitondrako fako kely teny an-tanana fa tamin'ny lalana nalehako an-tongotra mahatratra dimy kilometatra tsy nahita toerana fanariam-pako mihitsy aho mandra-pahatonga teny an-tanàna. Inona ny dikan'izany? saro-tadiavina ny toerana fanariam-pako, tena vitsy dia vitsy ny toerana natokana ho amin'izany, tsy misy ny fanondroana izay toerana anariana fako. Izaho maharitra mitazona iny fako iny rehefa mandeha irery fa ny hafa kosa manao ahoana? tena "manary fako" ara-bakinteny. Atsipitsipy eny rehetra eny ny fako, fa ny tena zava-doza ho an'ireo irahina manary fako dia atsentsina tatatra natao ikorianan'ny rano ilay fako. Tena poizina tanteraka ho an'ny foto-drafitrasa. Tsy mahagaga raha miha-potika lalana Anosibe mba rehareha tamin'ny fotoan'androny ohatra fa tena ifaninanana mihitsy ilay manentsina ny tatatra. Tsy ilay foto-drafitrasa no tsy manara-penitra fa ny anaovan'ny olona azy.
Lasa mampiasa fitaovana manokana handrotsahana ny fako?
Dia tena sanganehana tanteraka ny tena rehefa nahita ity toerana fanariam-pako iray tsy misy fako nefa ny manodidina azy hipoka fako tanteraka. Tena manary fako ara-bakinteny ihany. Toa tsy azo anirahana ankizy intsony manko ny manary fako fa avo loatra ny fanariam-pako. Tamin'ny voalohany mba nisy ihany ny tohatra fiakarana haha-iva sy mora anariana ny fako fa amin'izao fotoana izao tsy misy intsony izany. Samy tompon'andraikitra avokoa ny rehetra fa tsy ny olona ihany na ny kaominina ihany, tsy misy afa-miala eny fa na izaho manoratra aza. Dia eto ary isika izao: Maninona amin'izay raha arotsaka ny fako fa tsy ariana intsony? Arotsaka satria ao amin'ny toerana androtsahana azy no androtsahana azy, anaty toerana manokana fa tsy eny rehetra eny. Arotsaka dia mba manao izay hahamora ny fandrotsahana azy ihany koa ny tompon'andraikitra fa tsy ny fako indray no zary lolohavina mialoha ny androtsahana azy anaty dabam-pako io. Dia arotsahy ny fako fa aza ariana.
Fanazavana: niniana natao fotsy sy mainty ny sary tsy haha-rikoriko ny mpamaky.